Kick-boxing – «Afrique 2018» : nahazo 10 tapitrisa Ar ireo nahazo medaly | NewsMada
Kick-boxing – «Afrique 2018» : nahazo 10 tapitrisa Ar ireo nahazo medaly
Noraisin’ny filoham-pirenena, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha omaly, ireo mpanao kick-boxing miisa 12 mianadahy, avy niatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy “senior”. Fihaonana, notanterahina tany Kameronina, ny 23 – 28 avrily lasa teo. Nandrombaka medaly volamena 6 sy volafotsy 2 ary alimo 4 izy ireo, tamin’izany. Noho io zava-bita io, nankasitraka azy ireo ny fitondrana ka nanolotra lelavola 10 tapitrisa Ar. Marihina fa nametraka an’i Madagasikara eo amin’ny laharana faharoa, tamin’ireo firenena 13 nifaninana, io vokatra io.
Nambaran’ireo atleta fa nampiaiky ny Afrikanina ny fahaizan’ny Malagasy tany. Tokony ho medaly volamena 9 fa tsy 6 no azon’ny Malagasy fa nisy ny fitongilanan’ny mpitsara. “Hampitovian’ny federasiona laharana amin’ny matihanina na ireo “Pro”, manomboka izao, ireo atleta nandrombaka medaly volamena ka hahazo karama isam-bolana. Fanamby efa napetraky ny mpitantana izany, satria tena lesoka ny tsy fahampian’ny fampirisihana ho an’ny atleta”, hoy Andrianome Mamindraibe, filohan’ny federasiona.
Ankoatra izay, nambarany fa ny zava-bita tsara efa napetraky ny mpitantana teo aloha ny antony mbola hitohizan’izao vokatra izao.
Taom-piasana voalohany nitondran’ny federasiona vaovao ity, izay efa nahatsapana zava-bita mivaingana, toy ny nahatafatsanganana ligy efatra sy sekolin’ny kick-boxing roa : ny any Toliara sy ny ao Matsiatra Ambony. Tanjona manaraka ny hamenoana ligy manerana ny faritra 22.
Farany, miantso an’i Severin ny tenany hiverina hiaro ny voninahitr’i Madagasikara, eo amin’ny kick-boxing, fa tsy hanao morengy.